समाज Archives - Page 172 of 255 - Dna Nepal
पोखरामा ट्रक नालिमा फसेपछि….. २६ आश्विन २०७५, शुक्रबार १४:४२
पोखरा, असोज २६ । पोखराको चाइनापुल नजिकै ट्रक नालिमा फसेको छ । नालिमा ट्रक फसेपछि लामो समय पोखरामा गाडी आउजाउ गर्नै समस्या भयो । करिव दुई घण्टापछि क्रेनको सहयोगले ट्रक निकालिएको छ । दुईघण्टासम्म गाडी नै बन्द भएको थियो । अगाडीपछिको चक्का नालिमा..
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी श्रेयाको परिवारलाई महानगरले १ लाख दिने
पोखरा, असोज २६ । दुईसाता अघि पोखरा २२ पुम्दीभुम्दीकी १० बर्षिया बालिका श्रेया सुनारको बलात्कारपछि हत्या भयो । परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर छ । बहिनीको हत्यापछि घर चलाउँदै आएकी श्रेयाकी दिदीले काम गर्न छोडिन् । अहिले सुनार परिवारमा..
पोखरामा बसको ढोकाबाट खसेर एकजना घाईते
पोखरा, असोज २६ । बसको ढोकाबाट खसेर पोखरामा एकजना घाईते भएका छन् । पोखरा ११ फुलबारीमा ग १ ख ६५६४ नम्बरको बसबाट खसेर ६५ बर्षिया महालक्ष्मी बज्राचार्य घाईते भएकी हुन् । उनको उपचारका लागि मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा लगिएको छ । बस प्रहरीको नियन्त्रणमा..
सहगोत्रीसँग विवाह गर्दै हुनुहुन्छ ? होसियार !
एजेन्सी, असोज २६ । हिन्दू धर्मले सहगोत्रीका बीच विवाह गर्न नहुने विधान गरेको छ । गोत्र भनेको वंश र कुल हो । प्रत्येक नयाँ पुस्तालाई गोत्रले जोड्ने काम गर्छ । जस्तो, कसैको भारद्वाज गोत्र छ भने त्यो व्यक्ति भरद्वाज ऋषिको कुलमा जन्मेको हो । विवाहमा..
साथीसँगै घुम्न जाँदा किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार, दुई पक्राउ २५ आश्विन २०७५, बिहीबार १३:५२
रुपन्देही, असोज २५ । रुपन्देहीमा १६ बर्षीय एक किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ शिवनगर सामुदायिक वनको जंगलमा १६ बर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको रुपन्देही प्रहरीले जनाएको छ । बुटवलमा चलिरहेको..
पोखरामा ४ बर्षिया बालिकालाई २२ बर्षिया युवकको बलात्कार प्रयास
पोखरा, असोज २५ । पोखरा महानगरपालिका २५ याम्दीमा ४ बर्षिया बालिकालाई एक युवकले बलत्कार प्रयास गरेका छन् । याम्दी एक घरमा आमा बाबु सगँ बस्दै आएकी ४ बर्षिया बालिकालाई स्थानीय २२ बर्षिय युवकले बलत्कार प्रयास गरेका हुन् । मंगलबार घटना भए पनि..
प्रहरीका पुरस्कार–८ मध्ये ६ वटा पोखरामै, उत्कृष्ट अनुसन्धानमा सुवेदी, उत्कृष्ट ब्यवस्थापक कार्की
पोखरा, असोज २५ । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले ६३ औं प्रहरी दिवस भब्यताका साथ मनाएको छ । दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट काम गर्ने विभिन्न विधाका प्रहरी कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको हो । अधिकांश सम्मान पोखरा र त्यो पनि कास्की जिल्लामा केन्द्रित छ..
मुक्तिनाथमा भारतीय पर्यटकको मृत्यु
पोखरा, असोज २५ । मुस्ताङको मुक्तिनाथ दर्शनका लागि गएकी एक भारतीय नागरिकको मृत्यु भएको छ । उचाईका कारण हुने समस्याबाट उनको मृत्यु भएको हो । मन्दिरमा दर्शन गर्दा अचेत भएपछि उनलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो । उनको उपचारकै क्रममा..
गुडिरहेको बसको टायर फुस्किँदा १२ जना घाईते, ३ गम्भीर
पोखरा, असोज २५ । पोखराबाट सुनौलीका लागि छुटेको बस स्याङजामा दुर्घटना हुँदा १२ जना घाईते भएका छन् । पुतलिबजारको बगालेथोकमा लु १ ख ४८७७ नम्बरको बसको टाईरेट (चक्का घुमाउने डण्डी) फुस्कीएको हो । दुर्घटनामा १२ जना घाईते भएका छन् । उनीहरुको स्याङजाका..
चितनव, असोज २५ । बाटुलीमाया चेपाङको नागरिकतामा जन्म मिति २००१ साल छ । उनले राज्यले दिने बृद्ध भत्ता बुझ्दै आएकी थिइन् । गएको साउनमा आफ्नो भत्ता लिन उनी वडा कार्यालय पुगिन् । कालिका नगरपालिका ११ वाङथालमा उनको घर छ । घरदेखि दुइ घण्टा परको वडा..